I-20x30x500mm i-Octagon Carbon Fiber Tube ye-Multikopta
Inkcazo:I-20x30x500mm i-Octagon Carbon Fiber Tube,I-3k Octagon I-Carbon Fibiles Tubes,Ikhabhoni yeCarbon Tube yeMultikopta
Home > Imveliso > Ikhabhoni yeCarbon Tube kunye neClamp > Isithsaba seCarbon Fibre > I-20x30x500mm i-Octagon Carbon Fiber Tube ye-Multikopta
Packaging: I-102cm x 3cm x 7cm
Iicubbon roll esongelwe zetyhubhu zilungele zonke iintlobo zeeprojekthi zokwakha ezifuna ityhubhu yobunzima bomsebenzi ophezulu onokuthi uhlangabezane namandla asuka naphi na.
Umgangatho ogqityiweyo: glossy and Matte
Ukusetyenziswa: Ukuhamba ngenqwelomoya, iimodeli, ukuguqulwa kwezithuthi kunye nokusebenza kwamacandelo esinyithi.
Ubungakanani obuphambili kunye nokucaciswa: Ukucaciswa kweFiber: 1K, 3K
Uhlobo lokuluka : Iphondo. Thula
Uhlobo lweFibre: I-fiber yeCarbon + ikhabhoni, ifayibha yeKharbon + yeglasi, Ifayibha yeCarbon + aramid fiber
Ubungqingqwa : Ubungqingqwa obuthile bunokufezekiswa ngokweemfuno zabathengi)
Ukucaciswa kusetyenziso oluqhelekileyo
1. Umzekelo kunye ne-Order encinci?
Wamkelekile kwi-odolo yesampulu yovavanyo kunye nokujonga umgangatho. Iisampuli ezixutyiweyo zamkelekile.
2. Ixesha lokuKhokela
Ngokwendlela yokuphendula ivolumu yexesha lokuphendula. Ungaze uqhathe abathengi!
Iakhawunti encinci ye-oda
4. Ukuhanjiswa kwezinto
Sivame ukuthumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx okanye i-TNT. Ihlala ithatha iintsuku ezingama-3-5 ukufika.
5. Ndwendwela iNkampani
Akukho ngxaki kuthi, siya kubonelela ngenkxaso yezobugcisa!
I-Hobbycarbon CNC LIMITEDis ngumenzi we-OEM ngokukhethekileyo kwimveliso yeCarbon fiber, inkonzo yeCarbon fiber CNC, ezinye izinto zedrone kunye neemoto. Ngokonyuka kweemfuno zeshishini lokufaka uphawu, sandise ishishini lethu kwi-Aluminium CNC yokusika, ngokuzinikela ekuboneleleni ngenkonzo ebanzi kubathengi.
Inkqubo yokwenza izinto ngokwezifiso
1. Nceda unxibelelane ngokukhululekileyo kwaye usinike imidwebo kunye neenkcazo;
2.Siza kukucaphula ngaphakathi kweentsuku ezintathu;
I-3.Onderers kufuneka ihlawule ixabiso lokuthenga elingaphezulu kwe-30 pesenti yokuhlawula;
6.Ukuguqula umthengi ukuba ahlole iphakheji;
7.Izazi zihlawula intlawulo eseleyo;
8. Yenza uhambiso.
Kuwo onke amalungu, ukuba unawo nawuphi na umbuzo, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi.
Iikhathalo zomkhiqizo : Ikhabhoni yeCarbon Tube kunye neClamp > Isithsaba seCarbon Fibre
Ububanzi obucwangcisiweyo be-intsimbi enkulu ye-3K ye-twill ye-carbon fiber Qhagamshelana Ngoku
Ubungakanani be-OEM ecocekileyo yeCarbon Fibre Round Tube Qhagamshelana Ngoku
ikhabhoni yokuhombisa esongelwe yityhubhu Qhagamshelana Ngoku
ikhabhon fiber ityhubhu yokuhamba Qhagamshelana Ngoku
Isakhelo senqwelomoya yecarbon fiber Qhagamshelana Ngoku
Umzi mveliso wekhabhoni yomoya ojikelezayo Qhagamshelana Ngoku
I-3k ye-Carbon Fibre Exhaust yombhobho Qhagamshelana Ngoku
Umbhobho oMiselweyo weCarbon Fibre ye-Carbon Qhagamshelana Ngoku
I-20x30x500mm i-Octagon Carbon Fiber Tube I-3k Octagon I-Carbon Fibiles Tubes Ikhabhoni yeCarbon Tube yeMultikopta I-20x18x500mm Carbon Fiber Tube I-25x23x550mm Carbon Fiber Tube I-20x18x1000mm iCarbon Fibre Tube I-30X30mm I-Octagonal Carbon Tubes I-20X20mm Carbon Fiber Tube
I-20x30x500mm i-Octagon Carbon Fiber Tube I-3k Octagon I-Carbon Fibiles Tubes Ikhabhoni yeCarbon Tube yeMultikopta I-20x18x500mm Carbon Fiber Tube I-25x23x550mm Carbon Fiber Tube